Jasmine : November 2014
Posted by စံပယ်ချို | Friday, November 14, 2014
ငါ မင်းကို ဘယ်တုန်းကမျှ မမုန်းခဲ့ပါ
သို့သော် ချစ်လဲ မချစ်ခဲ့ပါ
ငါ အစပြုပြီး ရန်လိုချင်းမရှိခဲ့ပါ
ကိုယ် ခံစားရတဲ့ အရောင်ပဲလေ
ငါ့ ကိုအကဲခတ်နေတဲ့ သင့်
မျက်နှာကို သင် သေသေချာချာမြင်ရပါလိမ့်မည်
စိတ်ထဲက ခံစားမှု အလုံးအရင်းတွေ
အချိန်အခါ ကျရင် သက်သာစေမယ်
သင် လောကကြီးကိုချစ်တတ်လာမယ် ။
Posted by စံပယ်ချို | Saturday, November 8, 2014
သူ့ အပြုံး နှလုံးသားကြွေလဲ
ကိုလွင်ပြင်အတွက်ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗျာလေးပါ ။
Labels: ( တဂ်ပို့စ်), ကဗျာ
Posted by စံပယ်ချို | Sunday, November 2, 2014
ငါ့ အလွမ်းတွေကြွေခွင့်ရှိရင် ကောင်းမှာပဲ
အတွေ့အကြုံပြည့်ဝနေတဲ့ အလွမ်း( Blog day အမှတ်တရ )
အခါခါလောင်ကျွမ်းလှဲကျခဲ့ဖူးသူတယောက်မို့ ကယောင်ကတမ်းဖြစ်ဖို့မရှိတော့ပါဘူး။ ကြယ်ကြွေညတွေကိုလဲ ရိုးအီနေသူတယောက်မို့ ရူးသွပ်ဖို့မလိုတော...
အနောက်ခြမ်းကနေ လွမ်းချင်တိုင်းလွမ်းနေရတဲ့ အဖြစ် အသွားမတော်တဲ့လမ်းကို ငါဟာ လူစွမ်းကောင်းဆိုပြီး မျက်စိကိုမှိတ် နားကိုပိတ် ဂျွမ်းပစ်ဝ...
လောင်ကျွမ်းဖူးတဲ့ နှလုံးသား ကယောင်ကတမ်း ဖြစ်ဖို့မရှိတော့ပါဘူး အဟုတ်အမှန်တွေကိုဇယားချတော့ ပျားတုတ်ခံရမယ့်အဖြစ် ပေါက်ကရ အလွမ်းတွေနဲ့ ကမောက်ကမ...
ရွာနေတဲ့ မိုးစက် လက်နဲ့ခံ ကြည့်လိုက်တယ် လက်ကတော့ အေးစက်ပြီး နှလုံးသာ ပူလောင်နေဆဲ ဘယ်အချိန် ဘယ်အခါမှ ကျိုးကြေမသွားတဲ့ ခံစားမှုတချို...
ဇော်ဂျီ ပိတောက်ပန်း မခူးချင်စမ်းပါနဲ့ နှစ်ဆန်းခါတော်မီမို့ ဇမ္ဘောရည်ပြေပြေလိမ်းကာပါ့ ခပ်သိမ်းနယ်စုံစုံသို့ ပွင့်ငုံကို လင့်ကုန်ကြတော့လို...
ကြွေကျ မြေခသွားတဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်
ခိုးကြေင်ခိုးဝှက်ပဲ ကြည့်ကြည့် ခြောင်းမြောင်းပဲ ကြည့်ကြည့် လိပ်ပြာလုံသောဖြစ်ရပ်အတွက် ငါ ဘယ်သူကိုမှမကြောက်ပါ။ ဘ၀ရပ်တည်မှု အများကြီးထဲက မကောင်...
စံပယ်ရေ တခုခုရေးပါလားတဲ့ ကဗျာဆိုပြီးဖတ်တတ်စအရွယ်ကတဲက ကဗျာတွေကိုရေးတတ်ချင်ခဲ့တာ ဖတ်ချင်နေခဲ့တာ အဲတာတွေဟာ လက်တွေ့ဘ၀မှာ အမှားတခုဖြစ်...
ဖီလင် ၃၅ ... - နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့ မှာ ကိုယ့်အသက် ၃၅ နှစ်ပြည့်ပြီ။ ၂၀၀၈ မေလ နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်တုန်းက ဟိုင်းကြီးကျွှန်းမှာ ရှိနေတဲ့ ကိုယ့်မိဘတွေ တိမ်းပါးသွားရင် ဒု...
My Latte Art..... - လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ခွဲကျော်လောက်က သင်ထားတဲ့ ကော်ဖီဖျော်နည်းတွေက ဖျော်နေကျမဟုတ်ရင် လက်ပြတ်တယ်...။ အထူးသဖြင့် Latte Art လို နို့အမြှုပ်နဲ့ပုံဖော်တာဟာ နေ့စဥ...
ချ စ် လို့ရေးတဲ့ က ဗျာ( ၂ ဝ ) - "အလွမ်းပင်တော" တဲ့။ အလွမ်းပင်တွေ တောထနေလို့ အလွမ်းပင်တောလို့ ခေါ်တယ်။ အလွမ်းပင်တောလို့ လွမ်းသူတွေက ပြောကြတဲ့ လွမ်းသူတွေရဲ့အလွမ်းပင်တောလေ။ လွမ်းတတ်သူသာ ...
ခေါနုစုမ်ကလန်ထာန်ပုံပြင် - ချင်းပြည်ရောက်တုံး ကဖေးကန်ပက်လက်ဆိုတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေးမယ် ထိုင်မိတယ် အဲဒီမယ် ဒေသခံတွေနဲ့ စကားရော ဖောရောလုပ်ရင်း အောင်န်ထာန်ဆိုတဲ့ ချင်းတစ်ယောက်က သူ့ဘကြီးအ...
Morning Journal *** - ဂျပန်မှာကတည်းက အဲဒီက လူတော်တော်များများ daily planner သုံးပြီး တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် လုပ်ရမယ့် List to do တွေနဲ့ အချိန်ကို ကောင်းကောင်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာကို သေ...
ကျုပင်ကျုရိုး - မင်္ဂလာပါရှင်~~~ တခါတလေလည်း ဟိုကဟာယူ ဒီဖက်ပို့ ဒီကဟာယူ ဟိုဖက်ပို့နဲ့ ကုန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်သလို မယ်ငီး လည်းစာတွေကူးနေပါတယ်ဗျို့...😁 ဘုတ်အုတ်ကြီးမှာ အိပ်ယာပေါ်ပက...
August ပိတောက် - ဒီပိတောက်ပင်ကလေ တစ်လတစ်ခါလောက်ကိုပွင့်တယ်။ တစ်ခါပွင့်ရင်လည်း အပင်ပေါ်မှာ ၃ရက်လောက် ခံတယ်။ ကိုယ်ကလည်း ပိတောက်ကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ အဲဒီနားဖြတ်သွားတိုင်း အပင်ပေ...
“Behind the Scene” - “နောင်တ” တရားဆိုတာ အချိန်လွန်မှ ရတတ်သတဲ့လား? ကျွန်မ ဘယ်လိုဖြေဆည်ရမယ်မှန်း မသိ။ မျက်ရည်ကျဖို့ပင် အားမရှိတော့လောက်အောင် မေမေ့ရဲ့ရုပ်ကလပ်ကို တွေတွေကြီး ကြည...
အတွေ့အကြုံပြည့်ဝနေတဲ့ အလွမ်း( Blog day အမှတ်တရ ) - အခါခါလောင်ကျွမ်းလှဲကျခဲ့ဖူးသူတယောက်မို့ ကယောင်ကတမ်းဖြစ်ဖို့မရှိတော့ပါဘူး။ ကြယ်ကြွေညတွေကိုလဲ ရိုးအီနေသူတယောက်မို့ ရူးသွပ်ဖို့မလိုတော့ပါဘူး ဒါပေမဲ့လရောင်အောက်...
Trans Siberian ခရီးစဉ်-၈ - အရင်ပိုစ့်တွေမှာပြောခဲ့သလိုပဲ တော်တော်များများက Ulan Ude ကနေ Irkutsk ကို မနက်ရထားနဲ့သွားလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကမ္ဘာ့အနက်ဆုံး fresh water lake ဖြစ်တ...
ကျွန်တော်တို့ရွာ - ရသ သုတ ကဗျာ စာပေ သတင်းစုံတဲ့ ရွာလေးဆီက ဘုန်းဘုန်းနေကောင်းပါစ (မှတ်ချက် ဘုန်းတောက်လင့်က ဖွင့်မရဖြစ်နေ) အမေကျွန်တော့လိုပဲရွာကိုအသွားကျဲနေပြီ အလုပ်တွေများနေတာ...
စလုံး ဒိုင်ယာရီ - ညနေပိုင်း အလုပ် ဆင်းပြီး ပြန်အလာ ဗိုက်ဆာတော့ ပလာတာစား။ လက်ဖက်ရည်ဝင်သောက်တယ်။ ဒီအိန္ဒိယဆိုင်ရဲ့ လက်ဖက်ရည်က ငယ်ဘဝကို သယ်ဆောင်သွားတယ်။ သူ့ရဲ့ အနံ့အရသာက ငယ်ငယ်က...
စာအုပ်အငှားဆိုင် လွမ်းချင်း - ဓာတ်ပုံ−ညီညီဇော်(7daydaily) စာအုပ်အငှားဆိုင်လေးထဲသို့ ၀င်လိုက်သည့်အခါ တိတ်ဆိတ်ခြင်းက စတင်ဆီးကြိုနှုတ်ဆက်သည်။ ညီညီညာညာ စီထားပုံရသော်လည်း ကိုင်တွယ်သူမရှိ ...
ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်းနှင့်ဒါရိုက်တာ - လူခါး ရွှေအမြုတေမဂ္ဂဇင်း ဧပြီ.၂၀၁၇